Dhageyso: Cabdi Qeybdii oo ka hadlay marlabad inan waxba laga qaban saraakiishii ka danbeysay weerarkii lagu qaaday Gurigiisa – Walaal24 Newss
February 3, 2018	0	By walaal24
Gudoomiyaha Guddiga Dastuurka labada Golle ee Baarlamaanka Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa si kulul uga hadlay weerarkii bil ka hor gurigiisa lagu qaaday.
Waxa uu sheegay Cabdi Qeybdiid iney jiri karto qatar ku wajahan isaga iyo qoyskiisa, waxa uuna ku dhaliilay dowladda Federaalka in aysan wax ka qaban dadkii ka dambeeyay weerarkii 30-kii December 2017 lagu qaaday hoygiisa.
Cabdi Qeybdiid ayaa sheegay in weerarkii gurigiisa lagu qaaday la doonayay in isaga lagu dilo balse ilaahey ka bad baadiyay, waxaa uuna tilmaamay in arrintan aysan kaligii qatar ku ahayn, sidaa daradeed ay ku tahay cid walbo oo kamid ah madaxda dowladda .
Waxa uu xusay Senator Cabdi Qeybdiid weerarkii lagu qaaday gurigiisa ay ku abuurtay murugu badan, waxa uuna tilmaamay in qoyskiisa wali ay dareemayaan cabsidii ay ka qaadeen weerarkaasi.
Gudoomiyaha Guddiga Dastuurka labada Golle ee Baarlamaanka ayaa ugu baaqay labada Golle ee Baarlamaanka in Guddi baaritaan u saaraan arintan si uu uga bad baado qatar kale oo noloshiisa ku timaada.
Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa weerarkii Cabdi Qeybdiid gurigiisa ku qaadeen ciidamada Imaradka soo tababaren, ka tirsan milatariga Soomaaliya waxaa ay u saartay guddi baaritaan, hassa ahaatee ma jirto wali wax natiijo ah oo kasoo baxday baaritaankaasi.
Halka hoose ka dhageyso Senator Cabdi Qeybdiid shikiisa jara’id:-
Maamulka Gobolka Benaadir oo yeeshay kulan looga hadlayay Dakhliyada Gobolka
RW Khayre oo magaalada Garoowe kulan kula yeeshay madaxweynayaasha Hirshabeelle iyo Koofur Glabeed
Sawiro: Magalada Baladweyne oo laga xusay Maalinta xornimada Jabuuti ee 27-ka June
Sawiro: Guddoomiyaha golaha shacabka JFS oo la kulmay guddiga madaxa banaan ee Xuduudaha
Masjidka Soomalida ee Minnesota oo lagu qoray qoraalo ka turjumeya Weerarkii masjidka New Zealand lagu qaaday
Madaxweyne Donald Trump oo doonaya in liiska argagixisada uu ku daro kooxda Ikhwaanul Muslimiin
Madaxweyaasha Ruushka iyo Faransiiska ayaa ka wada hadlaya Suuriya, Ukraine dhanka telefoonka